Isi ụzọ Airparks.
Isi ụzọ Airparks. 8 ọnwa 3 ụbọchị ago #1537
Ejibeghị m FSX n'ime afọ ma chọọ ịmara ma enwere ebe nkiri maka Keystone Heights, FL airpark. Enwere m ụdị faịlụ niile mana pc ochie nwụrụ n’ikpeazụ wee nweta Windows desktop 10 ọhụụ ụdị desktọpụ, mechara nweta FSX ịgba ọsọ mana enweghị m ike icheta ebe m ga-enweta faịlụ ndị achọrọ m.
Daalụ maka enyemaka ọ bụla
Oge ike page: 0.150 sekọnd